トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Volana tapaky ny tapaky ny volana pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny endri-javatra (na fe-potoana famerenana-misokatra amin'ny fiainana)
※ mba haharitra toy ny fironana ho an'ny orinasa iray manontolo ireo izay
pachinko Favorite Please manondro hoe, mety ho fantatrareo koa ny olona, ??mba hifaninana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko dia ny tapaky ny volana no soso-kevitra tena . Ao amin'ny pachinko efi-trano, nefa tsy afaka zavatra ny hetsika amin'izao fotoana izao, raha oharina amin'ny zava-nitranga, dia tokony ho maro ny fivarotana fa ny olana lehibe iray payout, toy ny famantarana zava-nitranga. Ao
, dia ho nahoana ny fotoana mba hamoaka izany payout, raha niresaka ny hampiditra tapaky ny volana, mandray anjara amin'ny raharaham-barotra drafitra maro. Business drafitra ao amin'ny efi-trano dia pachinko, ao amin'ny ara-dal?na sy ny fanitsiana fantsika toe-javatra tamin'ny volana voalohany, dia avy eo isika manomboka. Amin'izao fotoana izao, na dia avy eo afovoany kely, dia mitandrina ny tahiry ho an'ny araka izay afaka hameno ny tsy fahampian'ny.
raha, dia toy ny koa ny tsy fahampian'ny, mivoaka ihany koa ny fotoana ampy mba hahazo indray ao amin'ny tapany faharoa raha afovoany. Noho izany, araka ny pachinko lafiny efi-trano, lalao, toy ny namoaka payout lehibe dia midika fa ny raharaham-barotra tsara indrindra dia mora ny ho eo afovoany. Tamin'ny, no tonga ny tena halehiben'ny ny raharaham-barotra, fa izay koa ny fiandohan'ny volana arakaraka ny ampahany, raha tratra ny tanjona tamin'ny volana voalohany, dia maty foana. Hatramin'ny andro
fotsiny satria tsy ny rehetra latabatra ho fanitsiana toy izany olana, fa ny hevitra ao an-tsaina, dia miezaha ho tsara kokoa mitandrina ny fanitsiana. Nail fanitsiana tamin'ny fotoana ny zava-nitranga, matetika ny fanitsiana dia mifototra. Aoka hatao ianao mba hametraka ny ara-dal?na 12.5 mm ny fantsika tamin'ny voalohany. Ao amin'ny toeram-pivarotana toy izany, raha misy vonona ny hanome izany, ka ny momba ny 13 mm ny ho avy misokatra. Miteny
rotational hafainganam-pandeha, ny rotational hafainganan'ny ny iray minitra, 0. Ny Miovaova arakaraka ny fotoana indray mandeha avy 5. Mere dia iray hafa, fa raha tsy izany tsy nitodika, isaky ny dia satria tsy tsy tonga, dia tsy hitovy be nijery ny fitambaran'ny fampiasam-bola vola. Mijoroa mihoatra noho izany toy ny sisin-dalana ihany koa, ho avy avy no tiako holazaina fa amin'ny tapaky ny volana. Avy eo, tamin'ny tapaky ny volana izao tontolo izao teo aloha ny karama, 's ny andro ho avy koa ny avy be dia be ireo izay mihevitra fa te-handresy. Raha toa ny fivarotana mampiasa napetraka ny
Horukon, mazava ho azy, dia mety ho lasa mamy napetraka ny Horukon.
ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko
ny raharaham-barotra drafitra, ihany koa dia mandray anjara lehibe amin'ny toe-javatra toy izany an-tratrany rehetra. Ary toy izany, ny tanjona ny ankamaroan'ny mason'ny afovoany no toerana tianao koa mahatsiaro fa tsy hoe zava-nitranga iray. Ary amin'ny andro voaloham ny zava-nitranga dia mikendry ny maso mazava ho azy, indrindra fa tamin'ilay raharaha, raha ny zava-nitranga dia dud, avy eo, andro vitsivitsy no tanjona fanampiny maso.
Ny antony dia tena tsotra, mba te-hametraka ny sary izay tonga avy amin'ny mpanjifa manoloana ny faharoa antsasaky ny volana, satria dia ilaina ny ho avy eto. Zendai toy ny eo azo atao, toy ny takelaka modely, ianareo fantsika sy ny toe-javatra ireo eo amin'ny toe-javatra maro andro vitsivitsy azo vetivety dia mankarary. Ao ny zava-nitranga ny ampitso, sns, ary ny toy izany maodely malaza, modely izay maika Noho ny avo izay mety, lazaiko fa mora-to-hahatakatra tsara indrindra tanjona maso.
in pachinko parlors izay handeha hilalao sendrasendra fotsiny toy izao ny raharaham-barotra isika mandinika ny fizotran'ny iray volana. Ady amim-pahendrena tany nandritra ny tombony azo amin'ny ny zava-misy, fa zava-dehibe ny manangana ny mety ho handresy. Izany no sary mba te-hametraka miaraka, fa dia ilaina ny ho avy eto. Zendai toy ny eo azo atao, toy ny takelaka modely, ianareo fantsika sy ny toe-javatra ireo eo amin'ny toe-javatra maro andro vitsivitsy azo vetivety dia mankarary. Ao ny zava-nitranga ny ampitso, sns, ary ny toy izany maodely malaza, modely izay maika Noho ny avo izay mety, lazaiko fa mora-to-hahatakatra tsara indrindra tanjona maso.
in pachinko parlors izay handeha hilalao sendrasendra fotsiny toy izao ny raharaham-barotra isika mandinika ny fizotran'ny iray volana. Ady amim-pahendrena tany nandritra ny tombony azo amin'ny ny zava-misy, fa zava-dehibe ny manangana ny mety ho handresy.